Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo La’ogaaday Qorshahoodii Qoomiyada Axmaarada Kadhanka Ahaa.
Kooxda TPLF oo La’ogaaday Qorshahoodii Qoomiyada Axmaarada Kadhanka Ahaa.
Posted by Dulmane	/ June 5, 2018
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa diirka kaqaaday qorsho howleedkii kooxda TPLF ee mudadii xilka ay haysay kaas oo kadhan ahaa qoomiyada Axmaarada oo ay Tigreega xiniin dirir leeyihiin.
ONA ayaa ogaatay in 10kii sano ee lasoo dhaafay xilkaqaadis iyo bahdil la isugu daray saraakiil iyo ciidan aad ubadan oo qoomiyada Axmaarada udhashay, waxayna xogtu miijinaysaa heerka ay gaadhay colaada Tigreegu ay uqabaan qoomiyada Axmaarada.
Kooxda TPLF ayaa lasheegayaa in ay xilalkoodii iyo darajooyin koodiiba ka xayuubiyeen 13 Janaraal iyo 45 Kornayl oo udhashay qoomiyada Axmaarada kuwaas oo xilal kala duwana kumagacownaa.
Sidoo kale kooxda TPLF ayaa 10 kii sano ee lasoo dhaafay ruqsaysay 250 sargaal oo gaashaanle yaal ah iyo waliba 21 kun oo askari oo udhashay qoomiyada Axmaarada kuwaas oo sababsaday qoomiyada ay udhasheen ee Axmaarada oo kaliya. Waxaana guud ahaan xilalkoodii iyo darajooyin koodiiba waayay tiro kur udhaafaysa 41000 oo qof oo ciidamada wayaanaha katirsanaa oo Xabashi ah.
Arintan ayaa muujinaysa colaada ay qoomiyada Tigreegu uqabto qoomiyada ay dariska yihiin ee Axmaarada, taas oo taariikh ahaan uu kadhaxeeyo xifaaltan iyo xukun isku qabsasho, waxayna labadan qoomiyadoo isu kala badali jireen xukunka baadilka ah ee Gumaysiga Itoobiya.
Dhinaca kale kooxda ay mowjadaha siyaasadaha ah kukaceen ee TPLF ayaa si lamid ah sida Axmaarada qoomiyadaha kalana bahdil iyo cadaadis kuhaysay waxayna ugu daraayeen qoomiyada Oromada iyo Dadka lagumaysto ee Soomaalida Ogadenia.